Ku soo dhowoow a-kassan, maal-gelinta shaqola'aanta ee Sweden!
Tani waa a-kassan
A-kassan ayaa jira, si aad u noqoto shaqaale badbaado leh haddii aad shaqo la'aan noqoto. Adeegga Isgaarsiinta iyo Isgaadhsiinta ee a-kassa ayaa adiga kuu jooga haddii aad ka shaqeysid warshadaha adeegga iyo isgaarsiinta.
Waa maxay sababta aad xubin noola noqon laheyd anag
Markaad xubin ka noqotid maal-gelinta shaqa la'aanta, waxaad xaqiijisay mishaarkaada. Waxaad markaas naga dalban kartaa magdhow haddii aad shaqo la'aan noqoto.
Xubinnimada labadaba maal-galinta shaqo la'aanta iyo adeegga iyo ururka isgaadhsiinta, Seko, ayaa bixiya amniga ugu fiican. Caymiska dakhliga ee Seko ayaa markaa lagu darayaa.
Sida loo noqdo xubin
Buuxi codsiga xubinnimada ee sekosakassa.se. Gal adigoo isticmaalaya Sharciga Bankigaada Haddii aadan haysan aqoonsiga bankiga, kaliya buuxi foomka codsiga oo u soo dir guriga si aad u saxiixdo. Xusuuso inaad dib noogu soo celiso markii aad saxiixday.
Caymis aan qaali ahayn
Noqoshada xubin ka mid ah maal-gelinta shaqo la'aanta aan ahayn kharash badan. Waxaad ka heli kartaa khidmadda xubinnimada ee laga heli karo sekosakassa.se. Habka ugu fudud ee lagu bixin karo waa kaliya lacagta tooska ah. Hagaaji tan isla markiiba ka dib markaad dalabkaaga noo soo gudbiso. Waxaad taas ku sameyneysaa sekosakassa.se/autogiro.
Na soo wac!
Na soo wac haddii aad su'aalo qabto. Waxaad nagula soo xiriiri kartaa telefoonka ama internetka isgaadhsiinta maalin kasta laga bilaabo 8da subaxnimo. 8 a.m. ilaa 4 p.m
Haddii ay kugu adkaato in aad fahamto macluumaadka, waxaa laga yaabaa turjubaan ayaa kaa caawin kara fasiraada? Noo soo sheeg oo waan ku caawinaynaa. Oo lacagna kaama gadno.
Hadaad noqoto shaqa la'aan
Yaa ka dalban kara magdhowga a-kassan?
Qof kasta oo xubin ka ah maal=gelinteena shaqa la'aanta wuxuu dalban karaa magdhow.
Imisa ayaad helaysaa?
Waxaa jira laba nooc oo magdhow ah, oo ku saleysan mushaharkaagii hore (magdhow dakhliga ku salaysan) iyo mid la yiraahdo magdhow aasaasi ah. Nooca magdhow ah ee aad xaq u leedahay inaad ku xiran tahay mudada aad xubin nala ahayd.
Mag-dhawga oo ku saleysan mushaharkaagii hore
Si aad u hesho mag-dhaw ku saleysan mushaharkaagii hore, waa inaad xubin ka ahayd ugu yaraan laba iyo toban bilood oo aad buuxisay shuruudaha aasaasiga ah iyo xaaladaha shaqada inta lagu jiro xubinimadaada.
Waxaad heli kartaa ilaa 80% mushaarkaagii hore ilaa ugu badnaan 910 karoon maalintii 100-kii maalmood ee hore. Muddadan ka dib, magdhawga ayaa la dhimayaa ugu badnaan 760 karoon maalintii.
Haddii aad xubin ka tahay maal-galinta shaqo la'aanta iyo Ururka
Shaqaalaha iyo Isgaadhsiinta, Seko, waxaad sidoo kale dalban kartaa magdhow sida nidaamka caymiska dakhliga. Tani waxay dhalin kartaa inaad heshid magdhow. Ka akhri wixii dheeraad ah halkan seko.se.
Magdhowga aasaasiga ah
Haddii aanad xubin ka ahaanin 12 bilood, hase yeeshee haddii aanad buuxin shuruudaha xaq u lahaanshaha magdhowga, waxaad heli kartaa magdhowga aasaasiga ah. Waxaad helaysaa ugu badnaan 365 karoon maalintii.
Waa maxay shuruudaha aasaasiga ah?
Shuruudaha aasaasiga ah macnihiisu waa inaad ka diiwaan gashan tahay Xafiiska Shaqada Dadweynaha, taas oo ah mid aan kaa joojineyn inaad shaqo ku qaadato ugu yaraan seddex saacadood maalintii ama ugu yaraan 17 saacadood wiiggii, adiguna haddii kale aad ku jirto suuqa shaqada .
Maxay yihiin xaaladaha shaqada?
Xaaladaha shaqadu waxay ka dhigan yihiin in labadii bilood ee ugu dambeeyay aad shaqeysay ugu yaraan 80 saacadood bishii halkii ugu yaraan lix bilood ama aad shaqeysay ugu yaraan 480 saacadood gudahood lix bilood oo isku xiga. Majirto bil ay kujiri karto wax ka yar 50 saacadood oo la shaqeyay.
Waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto
Boggeena internetka waxaad ka akhrisan kartaa maal-galinta shaqa la'aanta ee dheeraadka ah iyo waxa aad u baahan tahay inaad ka fekerto haddii aad shaqo la'aan noqoto. Maxay muhiim u tahay inaad xubin noqotid oo aad nala soo xiriirto haddii aad wax su'aalo ah qabtid.
Halkan ayaan kujoognaa!